मत गन्नै सुस्त- स्थानीय निर्वाचन २०७४ - कान्तिपुर समाचार
छैटौं दिनमा बल्ल ११३ स्थानको मात्र परिणाम
आश्विन ८, २०७४ राजेश मिश्र
काठमाडौं — १ सय ३६ स्थानीय तह रहेको प्रदेश २ मा मतगणना सुस्त भएकाले चुनाव सकिएको छैटौं दिन शनिबार साँझसम्म बल्ल १ सय १३ स्थानीय तहको मात्र परिणाम आएको छ । असोज २ गते भएको निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम ५ दिनभित्र आइसक्ने निर्वाचन आयोगले बताएको थियो ।
तर मत गन्ने काम सुस्त भएकाले अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ ।
‘सबै स्थानको परिणाम आइसक्न अझै २/३ दिन लाग्न सक्छ,’ आयोग प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालले भने, ‘आयोगले लक्ष्यअनुसार नै काम गरिरहेको छ, यतिन्जेलसम्म झन्डै ८५ प्रतिशत परिणाम आइसकेको छ ।’
गणनामा ढिलाइ हुनुका कारण थोरै मतान्तर पनि हो । प्रवक्ता ढकालका अनुसार प्रतिस्पर्धा कडा भएपछि मतपत्र पटक–पटक प्रतिनिधिहरूलाई देखाएर गन्नुपर्दा ढिलाइ भएको हो । उनले गणनालाई व्यवस्थित र छिटो सक्न आयोगले निर्देशन दिनुका साथै आवश्यक सहयोग पनि पठाएको बताए । प्रदेश २ को ८ वटै जिल्लाका मतपत्र ठूलो आकारमा रहेकाले पनि गणनामा ढिला भइरहेको छ । दलहरूबीच आउने विवादले पनि मत गन्ने काम सुस्त हुन पुगेको छ ।
सबैको चासो रहेको प्रदेश २ को एक मात्र महानगर वीरगन्ज र तीनवटा उपमहानगरको परिणाम भने अझै आइसकेको छैन । परिणाम आएकामध्ये ५५ नगरपालिका र ५७ गाउँपालिका छन् । जसमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी स्थानमा जित हासिल गरेको छ । कांग्रेसले ३४ स्थानीय तह जितेको छ भने ६ स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ । २२ स्थान जितेर दोस्रो स्थानका लागि संघीय समाजवादी फोरम प्रतिस्पर्धामा देखिएको छ । अन्य तीन स्थानमा अगाडि देखिएको छ ।
तेस्रो स्थानमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टी देखिएका छन् । दुवै दलले १९/१९ स्थान जितेका छन् । माओवादी ६ स्थानमा र राजपा ३ स्थानमा अगाडि छ । यसअघिका दुई चरणकै निर्वाचनमा धेरै स्थानीय तहमा जितेर पहिलो पार्टी बनेको एमाले भने प्रदेश २ मा ५ औं स्थानमा देखिएको छ । उसले १३ स्थान जितेको छ भने ५ स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ । यस्तै लोकतान्त्रिक फोरमले ३, नेपाली जनता दलले २ र नयाँ शक्ति पार्टीले १ स्थानीय तहमा जित हासिल गरिसकेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ८, २०७४ ०७:१०
चामलभन्दा सस्तो जीवन !
आश्विन ८, २०७४ अर्जुन शाह
बाजुरा — हुम्लामै चामल पाइन्थ्यो भने सम्भवत: पहिरोमा परेर ३५ वर्षीय तेजबहादुर बुढाको मृत्यु हुने थिएन । उनको अकाल मृत्युसँग चामलका लागि कम्तीमा ९ दिन हिँड्नुपर्ने हुम्ली बाध्यता जोडिएको छ ।
जिल्लामै चामल छैन, खाद्यका कर्मचारी पनि छैनन्, सीडीओलाई जोडबल गर्न सिमकोट आएकी छु –सौमती रावल ऐडी , उपाध्यक्ष, अदानचुली, गाउँपालिका हुम्ला
दसैंमा समेत चामल छैन, स्थानीयवासीको खप्की कति सहनु ? हामी त कार्यालय छाडेरै हिँड्यौं– खेमराज काफ्ले, श्रीनगर डिपोका प्रमुख
माथि भनेको भन्यै छु, तैपनि चाडबाडमा समेत चामल दिन नसक्ने भयौं– लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी
त्यसभन्दा सस्तो भयो उनको जिन्दगी ।